Fahalalahàna miteny · Jolay, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Jolay, 2019
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Jolay, 2019
Navotsotra rehefa avy nigadra dimy taona an-tranomaizina noho ny fanompana ny fitondram-panjaka i Tom Dundee, mpihira nentin-drazana Thailandey sady mpikatroka
Azia Atsinanana 29 Jolay 2019
'Avy amin'ny vahoaka no hananganana ny demokrasia, sa tsy izany? Tsy afaka atsangana avy amin'ny olona iray monja ny demokrasia .'
Maraoka: Saripikan'ny hetsi-panoherana 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Jolay 2019
Vitsy no nahazo sary tsara tarehy mihoatra ny an'i Omar El Hyani tamin'ny fihetsiketsehana ny 20 Febroary 2011 tany Maraoka izay nahitana ny sariny nalaina avy ao Rabat navoakan'ny The Nation ary navoaka tao amin'ny bilaogy Mamfakinch . Nalaintsika eto ireo sary tsara indrindra notsongaina.
Afrika Mainty 18 Jolay 2019
Mbola nanohy ny famerana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalaham-pitenenana izay anisan'ny famoretana taorian’ny fifidianana ny governemanta na dia teo aza ny fiafaran’ny fanakatonana ny Aterineto naharitra 10 andro.
Shina: Rahonan'ny sivana aterineto Amerikana
Amerika Latina 14 Jolay 2019
Andro vitsy taorian'ny kabarin'ny Sekreteram-panjakana amerikana Hillary Clinton momba ny fahalalahan'ny aterineto, nosakanan'ny SourceForge.net (fitehirizana loharano kaody tovozona malalaka) ny fidirana amin'ny adiresy IP avy any Kiobà, Iran, Korea Avaratra, Sodana ary Syria.
Amerika Latina 11 Jolay 2019
"Mamela ny fampahalalam-baovao tsy miankina tsy hanan-tsafidy "ara-dalàna" amin'ny fampiantranoana ny lalàna," hoy ny mpanao gazety ao an-toerana sady mpanoratra ato amin'ny Global Voices Elaine Díaz .
Afrika Mainty 09 Jolay 2019
Azia Atsinanana 04 Jolay 2019
Na dia efa lasa aza ny 30 taona hatramin'ny Vono olona tao Tiananmen, dia nanjary lohahevitra saro-pady hatrany ho an'ireo mpanao gazety monina ao Shina ny fitantarana ny famoretana mihoso-drà.